Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Beledweyne - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Beledweyne
Kulan looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Beledweyne
kulanka oo looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa amniga Guud ee magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa Maanta lagu qabtay Xarunta Maamulka Gobolka Hiiraan ee Magaalada Beledwyne.
Kulanka ayaa waxaa shir guddoomiyay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar ( Dabageed), waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha amniga iyo madaxda AMISOM.
Shirka ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeyeey sida lagu xaqijiin karo amniga magalada Beledweyne xilli magalada ay marti gelineeyso Caleama-saarka madaxda Hirshabeelle kadib doorashadii ka dhacyday Jowhar.
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa kusoo kordhay falal Amni darro, iyada oo todobaadkii hore lagu dilay Sarkaal ka tirsan Dowladda Hoose ee Magaalada Beledweyne.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 22-11-2020
Madaxweynaha Mexico oo baaq u diray Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka